Dowlada Maraykanka Oo Sheegtay Inay Aqoonsantahay Dowlada Soomaaliya | RBC Radio	Home
Sunday, January 13th, 2013 at 02:54 pm	/ 33 Comments Thursday, January 17th, 2013 at 07:30 am Dowlada Maraykanka Oo Sheegtay Inay Aqoonsantahay Dowlada Soomaaliya
Muqdisho (RBC Radio) Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay dowlada Soomaaliya in ay la yeelan doonto xiriir wanaagsan, iyadoo haatan madaxweynaha Soomaaliya uu ku suganyahay wadankaasi Maraykanka.
Masuul u hadlay dowlada Maraykanka ayaa sheegay in dowladaasi ay aqoonsatay dowlada Soomaaliya isla markaana wixii xiligaan ka danbeeya ay la yeelan doonto xiriir wanaagsan oo wada shaqayni ku jirto.
Kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka Jony Karson ayaa sheegay in Hilery Cilenton ay cadeyn doonto mowqifka dowlada Mareykanka ee ku wajahan Dowlada Fedelaka Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeeyaha arimaha dibada ee dalka Marykanka ayaa waxaa lagu wadaa in ay kulan ku yeeshaan wadanaasi maanta oo khamiis ah.
Jony Carson oo shir jaraa’id ku qabtay Washidton DC ayaa sheegay in xoghayaha Arrimaha dibada Mareykanka ay heshiis is afgarad ah la yeelandoonto Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud.
33 Responses for “Dowlada Maraykanka Oo Sheegtay Inay Aqoonsantahay Dowlada Soomaaliya”
wadaad yare says:	January 17, 2013 at 12:36 pm	Waa guul weyn oo diblumaasiyadeed oo uu soo hooyey madaxweynaha. Maashaa Allaah ayaan leennahey. Guul diblumaasiyadeed iney wax kasta noo hagaajiso uma fadhinno. Laakiin waa wax aad loogu baahi qabo in “boqorka habar dugaag” laga helo ictiraaf iyo wada shaqeyn si “dawacooyinka iyo waraabeyaasha” loogaga dacwoodo markii loo baahdo.
Barwaaqo says:	January 17, 2013 at 1:28 pm	War farxad leh hambalyo walaalahayaga Somaaliyeed. Very good news ka naxowna nafta waa! Alla maxaan mudane madaxweyne Xassan Sheekh u duceeyey in uu guul gaadho.
ali says:	January 17, 2013 at 1:44 pm	wa wax laga xumaado madaxweyne dal oo ay kuos dhawaynayaan dad jaaliyadda ahi dalka dibadda u tagay wana xaqiraada inay qaabilan aqalka hoose maraykankia marka malahana ismaba oga ninkaan waa inu aqoonsada baratakoolkiisa sida kale wa wadani daacad wax weyn ka badalay hogaanka laakin tan waa ku dhacay
wadaad yare says:	January 17, 2013 at 1:48 pm	Barwaaqo
Aad iyo aad ayaad walaal ugu mahadsantahey niyaddaada wanaagsan iyo qalbigaaga fiican. Wixii wanaag ah ee soomaali usoo hoyata shaki waxaan laheyn iney wada helayaan. Wixii dhib ah oo usoo hoydana sidoo kale. Jawaabtaadi aad Gaasira siiseyna waan arkey brilliant. Waxaa cajiib ah in la gaaro biseyl ah iyadoo wax la isku diiddanyahey in wax la isku oggolyahey. Markaas caqabadaha na hor yaalla si wada jir ah ayaan uga wada gudbi doonnaa inshaa Allaah.
Shaarka says:	January 17, 2013 at 1:56 pm	Waa wax laga xumaado iyo waa wax lagu farxo lee maan ku jireeynaa cimrigeen ilaaha na lehe.
Dalmar says:	January 17, 2013 at 2:28 pm	Illahow wadanka no hagaaji gaalo ictiraf laga donto waxba tari mayse
mandiq says:	January 17, 2013 at 3:41 pm	Waxba maaha inagaa in sidaas loo soo dhaweeyo sabab u ah, waa sida Wadaad yare sheegaye waa horumar, dantaadana harag ……… Insha Allah marka soo socotaad ka arki doontaan hadii aynaan hadana inagu lugaha is gooynin. Alle ma qadaro.
Madaxdana waxaan ka rajaynaynaa in ay Daacad u noqdaan, wax kastana ka hormariyaan danaha Dalka iyo Dadka iyagoo iska ilaalinaya in ay Alle danbi ka galaan si wax noogu hagaagaan.
Guul, wal-xamdu lillaah.
the wase man says:	January 17, 2013 at 3:43 pm	Horta marka hore hanbalyo ayaan leeyahaya Madax weyne Sheikh iyo Wafdigiisa Guusha muuqata ee ay gaareen mudadii ay ku sugnaayeen USA.
Marka xigta waxaa lagama maarmaan ah in Kulanka Madax weynuhu layeelan doono jaaliyada Somalida ee USA wax yaalo badan laweydiiyo madax weynaha sida:-
1- Maxaytahay sababta Dowlada Somaliya xiriir ula samayn weyday Dowlad deegaanad Somaliyeed ee jira sida Puntland kuwaas oo aas aaskana u ahaa dhismaha dowlada uu hada Madax weyne sheik madax meynaha ka yahay?
2- Maxay dowladu uhortaagan tahay Dowlada deegaanka Jubalaan taas oo hab sharci ah ku socota dhismaheedu. maxayse kaga duwanyihiin jubooyinku deegaanada kale ee Somaliyeed?
3- Dadka USA dagan ee hada Madax weynu lakulmi doono waa dad qaxooti ah oo badan koodu soo qaxeen bilowgii 1991 ilaa hada. Cida soo qixisayna ma ahayn dowlado shisheeye ee waxay ahayd madax weynaha qabiilkiisa oo ilaa hada haysta hantidoodi maguurtada ahayd sida guryihii ay dadkaasu daganaayeen, hoteeladoodi, dukaanadii iyo beerihii. Qofkii isyiraada bal gurigaagi soo eeg cida dagana way dilayaan oo way dhacday marar badan. Marka Madax weynahu dad qaxootiga ah oo shalay dadkii jeclaayeen iyo hantidoodi maguurtada ahaydba Muqdisho kuwaayeey haka jaahil bixiyo waxa dowladiisu u qorshaysay oo magdhow, dib udajin iyo hantidoodi loo soocesho ah.
4-Madax weynaha hala waydiiyo bal qorshohooda ku aadan sidii xamar ay xamartii layaqaanay unoqon lahayd oo dadka somaliyeed ka dhaxaysay ee aan reer kaliyihi sheegan oo hal xaafad looga gudbi lahaa.
5- Arinta intaas ii raacda waxay tahay in lawaydiiyo Dowladu maxay kayeelaysaa ama ka damacsantahay malaayiinta qaxootiga ah ee Kenya iyo Ethiopia ku silicsan ee xataa uusan marna soo qaadin sidii dalkooda hooyo looogu soo celin lahaa oo dhulkooda ay ubeeran lahaayeen ilaa hadaba masago dhacday bay cunaane qaar badan Malnutrition ayaa dishaye bal sidii inta hartay loo bad baadin lahaa.
6- Safarada Faraha badan ee Maalaayacniga inta badan ah oo Madaxda sare iyo wasiirada qaarkood isaga dhoofayaan xili gudihii wadanka waxbadan inlaga qabto ubaahanayahy in ay joojiyaan haloo sheego.
geelle says:	January 17, 2013 at 4:41 pm	marka hore ummaddaadu haku ictiraafaan marka hore, shisheeye ictiraafkiis taasaa shuruud u aj adna xasanow waad ogtahay cidwalbana waa ogtahay inaadan somali oo isku dhan aadan wada matallin ee waxba ha is daalin yaaku yiraahda.
laasqoray boy says:	January 17, 2013 at 4:41 pm	yes wase man anigu arinta jubooyinka waxaan moodi jiray in madaxweynaha been laga buunbuuniyey laakiin markaan arkay dad xildhibaano ah oo ka hadlaya oo leh anagaa madaxweynaha la kulanay o waxuu rabay gudiga maamul u samaaynta jubooyinka inuu badalo buu damcay oo uu ku bedelo gudi uu isagu keensado oo aan xataa jubbaland u dhalan arintaasi kahatar teeda baay leedahay hana ogaado madaxweynuhu hadii uu jubbaland is hortaago isaga oo aanay jirin sabab uu ku haaysto in deegaano badan laga qaadici doono sida sanaag,sool,gedo iyo jubooyinka iyo waliba nugaal.bari iyo iyo mudug waadna i fahmaaysaan asxaabeey cida halkaas ka qaadici doonta madaxweynuhu hadii uu rabo inuu puntland wada shaqaayn dhexmarto haka horleexdo jubbaland tan kale oadyaasha xaad iyo axmed diiriye oo xamar ka qaaylinaya adeer xamar baa wax laaydinka waaydiin laakiin kismaaayo,garbahaaraay iyo buaale waxba laaydinka weydiin maayo ku ekaada deegaanadiina intaa haaydiinku ekaato bililiqada iyo boobka
Sool-Man says:	January 17, 2013 at 5:50 pm	Guul mudane madaxwene ,insha Allah USA Mogadishu safaaradiidi bay ka foraysaa… Guuul somalia, cadawga somalia hadhaco.. Ka naxoo nafta waa cadawga soomaalida ku dhix dhoomanyoow.
Ciise Dheere says:	January 17, 2013 at 6:12 pm	Asc,
Arintaan waa guul u soo hoyatay umadda Soomaaliyeed iyo dowladoodaba. Sida ku cad qoraalka ka soo baxay Wasaarada Arimaha dibadda ee Maraykanka, Somaliya waxay ku talaabsatay horumar la taaban karo mudooyinkii dhowaa taas oo ay ugu muhiimsantahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale geedi socodkii nabadda sida dhamaystirka dastuurka cusub, doorashaddii madaxwaynaha iyo baarlamaanka cusub iyo ka gudubka marxaladdii ku meel-gaarnimada. Waxaynu ognahay hawlahaas oo dhan inay ka horeeyeen Madaxweyne Xassan Shiikh iyo dowladdiisa. Amaanta waxaa leh Madaxweyne Shariif iyo raisalwasaarayaashii la shaqeeyey. Waxaaba la oran karaa Xassan Shiikh dib buu u dhigay horumarkaas ay Somaliya ku talaabsatay mudadii uu madaxwaynaha ahaa ka dib markii uu muran galiyay dastuurkii lagu doortay isaga, sida nimaad federaal ah uga shaqayn karo Somaliya, cidda dhisi karta maamul goboleedyada, iwm. Nasiibse wuxuu u yeeshay in munaasabada ku dhawaaqida citiraafka Somaliya uu ku soo aaday waqtigiisa waxaanan rajaynayaa inuu uga faa’iideeyo fursadaan qaaliga ah shacabkiisa oo dhan kuna sii wado wadanka dhabaha nabadda.
Ciise Dheere (Ciise Siyaasi)
Cadaado says:	January 17, 2013 at 6:28 pm	ASC, dhamaantiin.
Aniga waxeey ila tahay waa tilaablo wanaagsan iyo horumar in Dowlada Somaliyeed eey xiriirka dibada waliba qaasatan kan USA eey hagaajiso iyo dhamaan wadamada aduunka. Waxaana u rajeeynayaa madaxda oo dhan in uu Ilaaheey u fududeeyo, kuna guuleeysiiyo hadafka bal in wax uun wanaagsan kusoo kordhiyaan soo celinta qaranka iyo Dowladnimadii Somaliyeed si buuxda. @Wise man, walaalow, hadii aad nin caqli leh tahay marka la fiiriya magaca aad isticmaashay, kuma aadan hadli laheeyn waxyaabo raqiis ah, amaba is burinaya. Aniga oo ogol in qof kasta oo muwaadin Somali ah uu xaq u leeyahay in muwaadiniinta kale sida anagoo kale iyo waliba madaxdiisa in uu weeydiiyo waxii uu su’aal ka qabo, amaba tashwiish uga jiraan. Shaki iigama jira in hadii aad weeydiisid qof mas’uul ah waxa aad meeshan kusoo qortay eey kaa qancin lahaayeen, amaba isku dayi lahaayeen in eey kaaga jawaabaan. Hadii aan isku dayo aniga ra’yigeeyga in aan kuu sheego waxa aad meeshan kusoo qortay; Su’aashaada 1 iyo 2 aad; wax loo baahan yahay maahan in Dowlada Somaliyeed maamul qabiileed ayada lug gooynaya, kuwa horay u jiray, iyo kuwa hada la rabo in la kar kariyo Dowlada uma baahna in eey la hadasho. Dabcan, muwaadiniinta deegaanada Somaliya oo dhan, oo eey ku jiraan kuwa Ethopia daga iyo kuwa kenya dega waa dadkoodii waana eey daneeynaysaa.
Su’aashaada 3 aad; Dadka Somaliyeed ee mareeykanka iyo aduunka oo dhan ku firirsan ee qaxootiga ku ah maahan hal cid oo kaliya; waana masiibo Somali oo dhan ku dhacday; daawadeedana eey tahay Dowladnimo iyo wadanoolaansho dadka Somaliyeed; waa hadii la rabo in laga baxo qaxootinimo aad ka qeeylineeyso;
Su’aashaada 4 aad; waxba kama duwan tan 3 aad; waxaana u arkaa gocosha iyo hal maqaarka diideeysa (dowladnimada qof diidaya amaba raba in uu wax tahdiido, si uu helo mudnaan uusan ka laheeyn dadka kale ee Somaliyeed). Taasi dhicimeeyso.
Su’aashaada 5 aad; hadii aad qaxootiga Somaliyeed ka naxeeyso kana danqaneeyso, lugaha ha qaban Dowlad Somaliyeed, qofkii doona madax ha ka ahaadee; Dowlada iyo waliba shacabka Somaliyeed oo aad adiga ka mid tahay ayeey ku xiran tahay in aan ka shaqeeyno dadka Somaliyeed sidii eey dalkooda ugu noqon lahaayeen, nabadna ugu heli lahaayeen.
Su’aasha 6 aad oo ah tan kaliya oo aan wax yar kugu raacsanahay in eey suurtagal tahay macquulinadeeda; hadana dadka mas’uuliyiinta ah ee uulul amriga noo ah ayaga hadii eey la noqoto in eey safraan, oo diyaarada raacaan, waa in aan uga harnaa kuna taageernaa go’aankooda; laakiin dabcan sida horay u dhacday madax horeba, waa suurtagal in su’aasha 6 aad dadka Somaliyeed qaarkood eey gar u arkaan, lana weeydiiyo madaxda sababta safarada ku qasbeeysa oo aan looga fursaneeyn in eey dadkooda iyo dalkooda dhex joogaan, kana raadiyaan taageero iyo dhisitaan gudaha dalka dhexdiisa ah.
ali xandal says:	January 17, 2013 at 7:43 pm	@ cadado adiga sidaadaba qabiil ayaa u hadashaa maba u hadashid si qaran ma garatay adeer iska aamus ,
midka kale hantidii dadkii la qaxiyay iyo guryahooda laga dhacay maa ka hadasho , markasta waxaa ku doodaa arin aan loo baahneed , marka naac naaacda igala tag aad mesha ku heyso , meshaan buuladii yareed aad ku nooled ma ahanee waa magaalo qabiilkii dilooday qurun ah oo dadbaa iska sheeganaaya caasimadiii wale somali ma jiraan ee waxaasa jira qabiil duli ah oo ka dilaacay wadanka
ciid yare says:	January 17, 2013 at 8:07 pm	cadaado walaal waxaa moodaa in aad ku jir tid hurdo yar waxaa leedahay adaa isburin hadana adaaba hadaladaadu is burin taas oo aan ula jeedo waxaad tiri maamulo aan shaqayn doonin oo qabaail u adeega iyo kuwa hada larabo in la kariyo ? hadaan kuu raaco fikir kaaga maxaad hada kohor markii larabay in la mideeyo gobolada dhexe ee labaa bi iyo maamulada ugu horeeya maamulka cadaado iyo gal mudug aad dufaaca ugu xiratay adoo amaanaaya oo leh waa dad dagan kuna eg maamul kooda maxaase markaa aad adiga guri gaaga uga bilaabi wayday oo u bur burin way day mise sheekadaadu waa anaa dur baanka tumin hadana anaa caburin oo aan ula jeedo dowlada kusheega anaa taageerin hadana markay iisoo dhawaato anaa lugaha ubixin oo sheekadii waxaad kusoo dhamaysay qowda maqashii waxna ha uqaban kkk
Barwaaqo says:	January 17, 2013 at 8:18 pm	Laasqoray boy
Yaab oo labdeenu xagaa iyo Somaliland baynu ka soo jeednaa ee arinku ma ku qabsaa ku qadi mayside? Mise inteenii abaarihii dhulkaa loo rarayna waan isa soo xaadirinaa? No wonder Md Xasan ku celceli hala sugo inta laga xoreynayo Jubooyinka si umadii iska lahayd masiirkeeda uga taliso. Timir lafbaa ku jirta;sababta oo ah waxa lagu degdegayaa xay tahay ?
ciid yare says:	January 17, 2013 at 8:25 pm	barwaaqo@ walaal waxaa tiri dowlad kusheega xasan waan taageeraa hadan waxaan jeclahay in ay isku taagto luga heeda iyo adoo hada leh waan u duceeyay laakiin adaa hadana is burin oo dowlad kusheegii aad intaa usamaysay markay kuu soo dhawaatay oo ay kugu soo socoto meeshaa kasoo dhawen lahayd ayaa waxaa lasoo bax day boor wayn oo ku qoran gooni isku taaga s\_land dee dowlad ku sheega ayaan taageeri hadana ayay imaamulin meel ma wada galaan ? waxaaba kaaga sii daran fowsiya waan taageerin dowladeeda iyo xasan hadana hargaysa yay ka soo dagin waxii ka socdaa d\_kusheegaas marka soo lama dhihi karo mash xarada d\_ kusheega anaa yeerin markii naa cowdeeda isoo dhawaa tana anaa bohol ku ridin amaba aan si kale kuu gu dhigo shibiraha markay arkaan maska waa qayliyaan sida shibirta loo yaqaan waaq waaqda markaa ayaa la dilaa maskaa oo dadka maqlaa qay ladaa shibiraha ay gartaan in hal kaa bahal ku jiro oo ay dilaan marka taas oo kale soo lama oran karo taageeradaada hadiisa aad taageeraysid maxaad ugu tanaa suli wayday ileen waa qaran kaagiiye kkk
ciid yare says:	January 17, 2013 at 8:58 pm	wadaad yare@ walaal waxaan layaabanahay sida aad dhiiqadda ugu soo dhex dhac did adoon is ogayn meesha aad maraysid amaba aadan garanayn fikiradaada hore iyo kuwaaga danbe is burin tooda taas oo aan ula jeedo shalay markii kismaayo keenya lahayd waxaan u dhisayaa maamul waxaad lahayd wadANKA WAXAA RABA CADOWGA SOMAALIYA IN AY KAL QAYBIYAAN CADOW GAAS OO AH SIDA AAD SHEEG TAY KENYA , ETHOP IYO AMER, hadana waxaad leedahay waan soo dhawayn marka shalay waa cadowgii somaaliya maanta na waa soo dhawayn meel ma wada galaan kadar oo dibi dhal waxaaba kasii daran markaad uja waabay say gaarisa oo aad lahayd ani barwaaqo uma taageeraayo irir hadana waxaad qoraagaaga ku tiri waan arkay saa usiisay jawaabta gaarisa hadaba kuma taa keeraayo irir iyo jawaab waa siisay gaarisa meel ma wada galaan kaba sii daran boga rayiga aan ku dhiibanaynay ex muslim ninkii watay waxaad aad ugu nasteexeenaysay oo aad ku baraa rujinaysay in aan qof wax dili karaa jirin ee ilaah wax dila waxna nooleeyaa ee ha baqin ayaad dhahaysay waa run ilaah wax waa dilaa waxna waa nooleeyaa qofkastaana sacadiisa dhaafi maayo laakiin isla adigii ayaad waxaa igu tiri ciid yare hadaf kaaga soo cadee hadaa raacsan tahay al shabaab waxaa naga dhexeeya dil hadii aan is aragno hadaba aaway diin tii aad ku nasteexeenaysay ex muslim ex muslim ka labaxay maga caan oo gaalada cadays tay hadaadan dilin ma waxaad dilaysaa ninka qiraaya ashahaadada yaase ubaahan in loo nastee xeeyo ma al shabaabka qiraaya ashahaadada oo laqal day mise ninka ka baxay islaanimada markka ujeed kaygu waxaa waaye shalay waxaad mam nuucaysay dilka maantana adaa leh waan ku dilin taas meel ma wada galaan waxaad tiri aan kusoo xasuusiyee cali qaliif hadii aad dhagay sateen waray sigiisa waxuu leeyahay gobolada koonfurta dowladaha dariskaa madoonayaan in ay arkaan dowlad ka dhalata oo caga heeda isku taagta hadana isla hadalkiisa ayuu kuleeyahay reer kismaayo maamulkooda haloo daayo taas soo isma burinaayo dadka qabiilaysta yaashaa markay had laayaan isma ogee waa xad raysan yihiin ayaa tiri laakiin hada adi maa is burin mise cali hadiise dadkii qabyaalada uhad layaa shaahaa ay xad ray sanaayeen adiga maanta soo lama dhihi karo fila somaaliya horteeda ayaa ku diigrinaysaa oo leedahay ah ah kkkkkkkkkkkkkk wakaas d\_ ku sheegii iyo xulufadeedii reer dhuxulo jiid saas uga quusta alow sahal amuuraha kkkkkkkkk
laasqoray boy says:	January 17, 2013 at 8:58 pm	cadaado inaan kuu jawaabo ma rabo laakiin wxaan kuu sheegayaa adeer puntland kolba warkeedu waa cadyahay sxb waxba ha warwareegina anigu afka kama qarsado reerkaa aad magacooda wadatid ama shaati galmudug ha wateen ama ximan iyo xeeb ama shabaab walle mar danbe beenbeen dadka xoolohooda kuma bililiqasataan adeer dalku waa federal iimaan yeelo oo meesha aad degantahay maamul ka samaayso markaa puntland waa tashatay sxb mudug qaaybta puntland ,nugaal,bari,sanaag qaybta puntland sxb waxaa ka taliya maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland wax aan federaal ahaayna ma rabno!! taas ku seexo oo ku soo toos dalku waa federal adeer laba gobol wax ka yarina maamulgoboleed maaha puntland waxaa degan 4 million oo somali oo dhan ka kooban waana 4 gobol oo aay ku jiraan gobolada somaliya ugu waaweeyn
Ugaas Raage says:	January 17, 2013 at 9:05 pm	Sallaan haloo diro mudane Xasan Shiekh Maxamuud iyo dhamaan Dawlada Somalia.
Nin walboo reerkaaga ah ma Xamar buu guri kulahaa waayaabe?Sowtaad badankiin baro hore iibsateen!
mida kale hadaad doonayso inaad Xamar Cadde kusoo noqotana cidi kuumadiidanee inkastay idinku adkaanayso dagitaanka Xamar Cadde maxaa yeelay boowe guryihii kirada ahaa baaba lagoyn karin kuwii iibsiga ahaa warkoodba daa!
Barwaaqo says:	January 17, 2013 at 9:47 pm	Ciid yare
1. Marka u horaysa in Somalia ilahay dawlad wanaagsan oo cagaheeda isku taagta waan ugu ducaynayaa sababta oo ah walaalkay wanaagiisu waa wanagayga, hadaan gooni isu taag doonayana kuma farxayo kala daadsanantooda.
2. Dawladu in ay cagaheeda isku taagto waan jeclahay oo in aan wada-hadalo ayaan rabaa; waxaan rabaa in aan qof caafimaad qaba oo aan bukin la xaajoodo ileyn dowlad liidata waaban ka xishoon in aan la hadlo iniga oo caafimaad qaba sidaa darteed waa in aan u duceeya qolyaha xanuunka ku sii kicinayana ka celiyaa sida adiga oo kale! 3. Sabab kale oo aan u taageeraana way jirtaa oo dadkii igu kalifay in aan goosto oo Xasan Sheekh dawladiisa jalaafaynayana waan arkaa oo waxaan leeyahay nasiibkiina ayaa noqday in aad degaan ku yeelataan dhulka gumaysigu haysto una badnaataan’e ka waantooba dhulboobka. 4. Ka tanaasuli maayo qaranimadayda aan lixdankii ku dhiibay sida fudud wada hadal ayaa noo bilaabmi doona loona jooge waxa ka soo baxa.
ciid yare says:	January 17, 2013 at 9:54 pm	barwaaqo @ laasqoray waa runtii maroodiga takarta saaran ma arkee tankale tan saaran buu arkaa waxa aad xasan ku taageeraysid soo irir maaha maxaa udiiday in uu laasqoray kismaayo taageero mida kale waxa wadaad yare ku taageerin s\_land soomaliland maxaase udiiday laasqoray in uu taageero kismaayo hadiise laas qoray uu kismaayo wax ka galin oo uu yahay reer s\_land maxaa wadaad yare ka galay s\_ land adeer somaali waa istaqaan mana soconayso ritiga anaa rarin hadana aa furin kkkkkkkkkk
Ali soomali says:	January 17, 2013 at 10:54 pm	Waa guul usoo hooyatey ummadda soomaliyeed mar haddii dowladdii ay taabogashay oo madaxweynihii adduunkana u aqoonsaday, madaxweynaheenii XASAN Ilaah ha daayee lagu casumay White House markan waxaan u maleynayaa waa sidaan qonofka u baxnay wax nasoo qabanaya ma jiraan kuwii soomalinimada ka cararayey maanta ha usoo cararaan.-
laasqoray boy says:	January 17, 2013 at 11:56 pm	barwaaqo waa runtaa walaal laakiin waxaan ogahay xaqiiqda ah in madaxweyne xasan uu jubooyinka si gaara u eegayo anigu ma jecli in laays dulmiyo maamulka hada la rabo in jubooyinka loo sameeyo qabiil ilaa hadda wax ka dega jubooyinka oo diidan ma jiro laakiin madaxweynuhu si qaabdaran buu ula dhqamayaa jubooyinka wuxuu ku leeyahay jubooyinku maamul ma samaaysan karaan anaaba u samaaynaya gudigii maamul u samaaynta jubootyinka sida loolo dhaqmay waan ognahay markaay xamar tageen waxaa kuu sii dheer odayaashan xaaraan ku naaxa ah oo axmed diiriye ka mid yahay oo jubooyinka ku waashay jubooyinka beesha xamar degan laba jufo oo ka mida baa ka degan labadaas jufona waxba looma diidana laakiin iimaan ha yeesheen oo ha aamuseen
Binmaxmud says:	January 18, 2013 at 12:05 am	Waxaad moodaa in dadka inta badan ayba weli ka dhaadhacsaneyn waxa mushkilada Somaliya tahay. Macquul miyaa in aanan weli la fahmin in hadii Soomaalidu ay iyagu is aqoonsan iskuna kalsoonaan, cid kastoo kaloo aqoonsata in ay qiimana lahayn faraxna lahayn micnana lahayn?
Waxaa mudan in la sheego loona sheego Soomaalidoo dhan, ha ha ahaadeen kuwa daacada ah oo haajiskoodu yahay in Soomaaliya dhibta ka baxdo, ama kuwa mawqifkooda cad uu yahay reerkiinu wax ha helo reer hebelna yuusan wax helin, amaba kuwa munaafiqnimo iyo qabyaaladiba ka buuxdo lakiin mooda in ay naftooda cid aan ahayn siri karaan, kuwaasoo dhan waa inay ogaadaan Wallaahuusan jireyn qabiil ama gobol guul gaaraya ilaa intii Soomaaliya iyo Soomaalidoo dhan guul gaaraan, mida kaliya ay taas ku imaan kartana ay tahay Allaah tawfiiqdiis ka bacdi: Wadahal, Isaqoonsi, isku meel wax u wadid, isu taansulid,is cafin iyo in lagu heshiiyo in loo daneeyo kaliya ciziga iyo sharafta dal Somaaliya la dhaho iyo dad Soomaali la dhaho, ee aan loo danayn reer hebel ama land hebel.
Cadaado says:	January 18, 2013 at 12:09 am	ASC, dhamaantiin,
@Ciid yare, beenlow munaafaq ah ayaad tahay, waxaana kuu cadeeynaya aniga ayaa hada kuu sheegaya, maamulka Galmudug, Ximan iyo Xeeb, iyo Ahlusuna hadii xataa la balaarinayo oo ah wax fiican, waa in eey Dowlada Somaliyeed magacowdaa, sameeysaana Gudoomiyayaasha labadaas gobol ee Galgaduud iyo Mudug, oo waliba mar hore Dowladii hore ee Shiiq Shariif sameeysay. Marka hadii hada xataa eey Dowladan cusub is badal ku sameeyso, raali ayaan ka ahay, saa ayada ayaa dalka mas’uulka ahee. @ Laas qoray, adigana beenlow kale ayaad tahay oo waxaad ka been sheegtay in Puntland degaan 4 million, runtii kama xumaan laheeyn walaahi dadka Puntland hadii uu Ilaaheey badiyo, laakiin, “the arithmetic just does not add up”. Oo xisaabtaas tirada aad sheegtay isma qabaneeyso ka waran hadii aan ana ku dhaho reer qurac iyo reer qansax waa Afartan Milyan oo qofood. Wax duulayo maahan taas, ee isku xishoo. Beenta waa xaaraanee, waqtiguna waa 2013, oo ma’ahan waqtigii “inta madow iyo qolo hebel yaa badan la’isweeydiin jiray”. kkkkkkkk
Hani says:	January 18, 2013 at 2:36 am	Laasqorey boy @
Walal jubboyinka sida loo kale dago ma taqaana ? Meeqo beel baa dago ? Maxaa keenay qilaafka ? Maxaa IGAD iyo Kenya ka galay jobboyinka ? Beledweyne, beydhabo, jowhar, marka, iyo meelo kale oo badan baa alshabab laga xoreeyey maxee uu dhihi wayeen mamuul baa uu sameyneeynaa ee jobboyinka bes ugu ordaan ? Maxaa Hal qabil ee mamulka dhan kaligood uu sameynaayan ? Maxaa uu diday in ee beel kasto ka soo qeyb galiyaan mamulka ? Madaxweynaha iyo xukumada wee dhaheen tuulo, dagaan, dagmo ila heer gobol baa wax lagu qeybsanaa ee mamulka Hal beel awoodisa lama siinaayo. Wallahi runta hadaad rabo adoona qabil ku tagereen dadka mamulka wado, beelo badan oo jubboyinka dago sida hawiye, rahanweyn, jereerweyne, dir iyo Marixaan baa madaxweynaha uu dacwooday oo mamulka cadalaad daro iyo awood boob iyo dhul boob ku sheegay. Kenya baa Hal qabil tageersan baa la dhahay. War dulmiga iyo inkiraada dadka dago jubboyinka hala dhaafo oo mamulka dhinacooda ha looga daro oo xaqooda hala siyo hadi la rabo in mamulka uu shaqeeyo! Waa iga talo.
laasqoray boy says:	January 18, 2013 at 5:01 am	hani aad baan kuu salaamaya walaashaay gabadh soomaaliyeed baad tahay walaal oo si fiican fikirkeeda u dhiibanaaysa walaal malaha seefla boodaad leedahay oo qoraaladaahyda si fiicanba uma akhridid anigu intaas qabiil aad shegtay walaal xaq muqadas ah baay uleeyihiin inaay maamulka qaaybtooda ka qaataan oo helaan waxa aay xaqa u leeyihiin laakiin siyaasadda dawladda baan diidanahay jubooyinka iyo gedo ku wajahan waxaad moodaa in madaxweynuhu culaays dadka saarayo tan kale oo aan aad uga soo horjeedo waxa weeye dadka muqdisho ka qaaylinaya oo leh jubooyinka maamul ma samaaysan karaan waa yaab dadka dhibaatada wada hadaanu kuu sheegaaynaaye dhegahaaga fur waa beesha hawiye sababtoo ah waxaay la qaylinayaan baay qabaan waxaa beeshaas ka dega jubooyinka iyo gedo waa shiikhaal iyo gaalajecel iyagana waxba looma diidadana raxanweyn iyo jareerweynena ma amqal iyaga oo cabanaya anigu marka walaal hadda hadaan anigu dhaho anoo laasqoray dega waxaan degaa jubooyinka oo laay weeydiiyo sidee u degtaa oo aan iraahdo mareexaan ,majeerteen iyo cawramale baanu isku reernahay dee waa lala yaabayaa? waa waxaas waxa meesha ka socda xamar dadbaa xamar ka qaaylinayaa aay ugu horaayyaan odaydhaqameed ku sheega xamar jooga oo leh hawiya dega jubooyinka dee ana inaan jubooyinka iyo gedo ka hadlaya maxaa ii diiday soo beeshaaydu ma degto bal iiga soo jawaab abaayo?
Hani says:	January 18, 2013 at 3:44 pm	Lasgorey boy@ Maxaa uu arki la dhahay dadka mamulka wado waa hal beel oo away belahii kale ? Walal dadka muqdhisho ka qalinaayo bellaha ee yihin waa belaha ka soo jeedo jobboyinka oo xamar waxaa joogo beelo badan, walaal runtii hawiye waxaa ka qeylisiina waa mamulka dulmiga ah oo in lagu daro loo diday ayaga kaliya ma ahan oo Wallahi beelaha kale mar badan baa TVga iyo wararka ku Arkay marka hawiye gaaljecel iyo sheekhaal kaliya ma dago jubboyinka waana waxa aan kuu dhahay ma taqaana inta beel oo dagto. 35 beel baa Dago. Madaxweynaha iyo dowlada wee dhaheen dadka daganka baa mamulka sameynaa lakin dhibka la wado oo dad laga degaano badan yahay baa mamulka isku koobtay oo igad iyo kenya wadato waxaas waa waxa dhibka keenay, jubbland 98 ila hada Hal qabil baa wado wali ma hirgalin sababtu waxaa waye in beelaha kale ee tageerin mamulka ila hada wax taageeri haayo ma leh ila lagu daro bellaha dhan markaas bee shaqeeyneeysa.
ciid yare says:	January 18, 2013 at 8:46 pm	barwaaqo @ waxaad leedahay waxaan rabaa in ay dowlada caga heeda isku istaagto ayaan rabaa waxaa diidin kala daad sanaan teeda hadana waxaad leedahay waan ka faanin dowlad liidata oo waa ban ka xishoon laba daas hadal meel ma wada galaan ?? ee adaaba is burinaaya amaba dayaxa dushiisa doon ku wada kadaroo dibi dhal waxaa tiri ka tanaa sulimaayo kudha waaqidii aan ku dhiibtay 60kii sida fudud hadana waxaa noo bilaabinin wada hadal loona joogee waxii kasoo bixin hadaba wada hadal baan laga lin iyo ka tanaa sulimaayo meel ma wada galaan taasna waa is buris kale oo lamacna ah qoraxdaa dusheedaa daar cad ka dhistay kkkk sheeka daadu waa cirka tiigsan waayay dhulkana jiifsan waayay aduunow ta ta baale tana caawa ka joogay kkk
ciid yare says:	January 18, 2013 at 8:55 pm	cadaado @ adeer yaa been low ah ani iyo adi hadana munaafaq ah war soo tii xasan uu iskugu yeerray galmudug xumin iyo xeeb iyo ehlusuna muqdisho oo uu ku yiri soo midooba oo la imaada hal maamul oo udhaxeeya gobolada dhexe markaasna ay ku shireen galkcyo ka dibna aan ka qayb galin madaxda maamulkiina ka dibna ay eedeeyeen labada kale sida galmudug iyo ehlusuna oo xataa c\_qaydiid uu yiri aniga iyo ku xigeenkaygu waan utanaasulaynaa midaynta gobolada dhexe adeer wax qarsoon majiraan somaalina waa istaqaan cida munaafaqa ah iyo cida jeebka wayn ee qaranka wasa qaynaysa dibad iyo dalba marka adeer sheekadaadu waa dur baanka anaa garaacin hadana anaa caburin kkkkkkkk
laasqoray boy says:	January 19, 2013 at 1:57 pm	hani thanks bal ii sheeg ha wiye aan shiikhaal iyo gaaljecel ahaayn oo jubooyinka iyo gedo dega?anigu ma garanayao eh tan kalena magaca haaygaga ciyaarin lasqorey waaye ee maaha lasgorey intaas kaftan u qado
Hani says:	January 19, 2013 at 7:19 pm	Iga raali ahaaw magac ugu ma talagalin ee wee iga qaldantay walal. Beesha Cabdi Yuusuf oo ka tirsan qabiilka Xawaadle iyo adeerkood ayaa waxa ay wax ka degtaa degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan gobolada Jubada hoose , Jubada dhexe iyo Gedo sida degmooyinka Jilib,Bu’aale, Saakow, iyo deegaanada Hoombooy, Buulo Xaaji,Aboorow,Habaaqa,Beer-xaano,ool-oole, Koorweyne, Canjeel ,Janaay Cabdalla, Buulo-Xaawo , Baardheere, Farjanaay. Busleey iyo Garas Shabo oo meelo ee beelaha kale la dagaan iyo meelo ee kaligood dagaan.
Waxaa kale oo dago beel la dhaho degodie oo j-hoose dago. Waxaa kale oo daga abgal qeeybti la dhaho Harti abgal oo jamame dagaano uu dhaw daga.
Waxaa daga ceyr oo daga lakin dagan kaligood ma leh oo dadka bee la dagaan. Waxaa kale oo jooga karanle kuwa la dhaho oo dago, kuwa kale oo ilowsanahay. Laakin sheekhaal iyo gaaljecel baa uu badan markii la dhaho hawiye sida ee Marixaan iyo Ogaden markii la dhaho darood marka walaal ma xaq baa sheekhaal iyo gaaljecel oo ka degaano badan majeerten ama Harti in mamulka loo diido xil weyn oo Harti oo dagmo kaligood aan dagin in xil weyn uu dagaalamaan? Taas ma shaqeena? Iyo mamulka dhan in Hal beel dhisto, uu firso mamulka dadka dhisaayo, hawiye, rahanweyn, dir, jeererweyne kuma jiraan. meesha xil weyn waxaa iska leh Marixaan, Ogaden, sheekhaal iyo gaaljecel iyo beeshi kale oo badan oo ka mid ah dir iyo rahanweyne oo dagmooyin, tuulo, dagaano dago. Beel kasto dagmo, tuulo, dagaanka ee uu badan yihin in godomiye looga dhigo beesha ku xigto la siyo ku xigeen oo mamulka Saas loo wadaago Lakiin beelo laga deegan badan yahay xil weyn in uu dagaalanto oo kan ka deegano badan loo diido xil weyn waa ta dhibka keentay.